अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पहिलोपटक आन्द्राको सफल शल्यक्रिया – Nepali Health
अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पहिलोपटक आन्द्राको सफल शल्यक्रिया
२०७५ जेठ २१ गते १४:११ मा प्रकाशित
अछाम, २१ जेठ । अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पहिलोपटक आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ ।
तीन दिनदेखि पेट दुखेर बिरामी भई अस्पताल पुगेका साँफेबगर–१३ बाब्लाका ५२ वर्षीय अम्बरे विष्टको आन्द्रामा परेको प्वालको शल्यक्रिया गरिएको हो ।
डा गौचनका अनुसार यस्तो प्रकारको शल्यक्रिया प्राइभेट अस्पतलामा गराउँदा रु दुई लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ । बिरामी विष्ट खतरामुक्त अवस्थामा रहेको शल्यक्रियामा संलग्न डा पवन अग्रवालले बताए ।
शल्यक्रियामा डा बिवप्लव श्रेष्ठ, एनेस्थेसिया सहायक महेन्द्र कुँवर, नर्स नारन्ती महरा, कञ्चन चौधरी, स्वास्थ्य सहयोगी दीपा बम, लक्ष्मी विकलगायतको सहभागिता थियो । न्याय हेल्थ नेपालले अछाममा बयालपाटा अस्पताल र दोलखामा चरिकोट अस्पताल सञ्चालन गर्नुका साथै सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालमा हाडजोर्नीलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान हुँदै आइरहेका छन् । रासस
जुस पिएर ‘अनशन जारी’ भनेकी नर्स डिक्कीको अनशन पुन: तोडियो (११ बुँदे सम्झौता सहित)
नौ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्यले गर्‍यो छ लाखको फोन !
कांग्रेसले बनायो छायाँ सरकार, पार्वता चौधरी बनिन छायाँ स्वास्थ्य मन्त्री
सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच प्रत्यारोपण केन्द्रमा बार्ता
जेठ महिना देखि स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनेलाई उपचार सुविधा एक लाख रुपैयाँ
बैतडी : गर्मीका कारण बिरामीको संख्यामा बृद्धि
यी हुन् बर्षाको समयमा सौन्दर्य जोगाउने उपाय
यी हुन् बर्ड फ्लुबाट जोगिन थाह पाउनै पर्ने ९ कुरा
२० महिना पछि प्रयोगशालाको दोस्रो पटक नेतृत्व गर्न पुगिन डा रुना झा
समायोजन नटुंगिदै अनमीको रमाना ?
चितवन मेडिकल कलेजले पायो मिर्गौला प्रत्यारोपणको अनुमति